स्वर्गीय सांसद उत्तरकुमार वलीकी पत्नी विमला वलीले पाहिलोपटक दिईन यस्तो प्रतिक्रिया – जलजला अनलाइन
Posted on March 13, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on स्वर्गीय सांसद उत्तरकुमार वलीकी पत्नी विमला वलीले पाहिलोपटक दिईन यस्तो प्रतिक्रिया
फागुन २९, दाङ । सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका स्वर्गीय प्रदेश सांसद उत्तरकुमार वलीकी पत्नी विमला वलीले पार्टीले टिकट दिए चुनाव लड्ने बताएकी छन् ।
सांसद वलीको निधनपछि जिल्लामा उपनिर्वाचनको चर्चा चलिरहँदा बुधबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै विमलाले आफ्ना स्वर्गीय पतिका अधुरा इच्छा पुरा गर्न आफू चुनाव लड्न तयार रहेको बताएकी हुन्।
‘उहाँले जनतासँग गरेका वाचा पुरा गर्न र उहाँले अघि सारेका अधुरा काम पुरा गर्न म चुनाव लड्ने निश्चयमा पुगेकी हुँ,’ उनले भनिन्।
३४ वर्षीया वलीले यो विषयमा हालसम्म पार्टीका कुनै पनि नेतासँग कुरा नभएको बताइन्। वलीको १३औं दिनको श्रद्धाञ्जली सभामा ५ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने स्वर्गीय सांसद वलीको सपना साकार पार्न विमला अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए।
उनले आफू अझैं पीडा मै रहेकाले थप कुरा केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिइन्। रूकुम पुर्ख्यौली माइती भए पनि वली भने नेपालगञ्जमै जन्मि हुर्केकी हुन्।
कलेज अध्यनका लागि नेपालगञ्ज पुगेका स्वर्गीय सांसद वलीसँग त्यही क्रममा माया बसेपछि उनीहरुले भागी विहे गरेका थिए।
विमला वलीले श्वास्थ्य विषयबाट आइए उत्तिर्ण गरेको जानकारी दिइन्। वलीका ७ र ९ बर्षका दुई छोरा छन्। जो काठमाडौंमा अध्यनरत छन् ।
माघ २४ गते प्रदेशसभाको बैठक सकेर दाङ तुलसीपुरस्थित घर तर्फ आउँदै गर्दा प्रदेश नम्वर ५ का सांसद वली दुर्घटनामा परेका थिए।
दाङको दंगिशरण गाउँपालिका वडा नं. ६ लेटार निवासी सांसद वली गत वर्ष भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भने उनी पराजित भएका थिए । स्वर्गीय वली त्यसको एकआध वर्ष पहिले मात्रै राजनीतिक रूपमा एकाएक चर्चामा आएका थिए।
एमाले-माओबादीविचको पार्टी एकताबारे प्रचण्डले गरे यस्तो खुलासा
Posted on April 24, 2018 April 24, 2018 Author Jaljala Online
वैशाख ११, चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वैशाख १४ गते पार्टी एकीकरणको नयाँ मिति घोषणा गरिने बताएका छन् । पार्टी एकता तोकिएको मितिमा नभई अप्रत्यासित रुपमा ड्याम्मै हुने बताएका अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार भरतपुरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नयाँ मिति तोकिने बताएका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डले मजदुर दिवसका दिनमा पार्टी एकता हुने […]
ओलीको यो अडानले एमाले–माओवादी एकतामा लाग्यो ‘ब्रेक’, के हुन्छ एकता प्रक्रिया ?
Posted on April 21, 2018 Author Jaljala Online
बैशाख ८, काठमाडौं । जब माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता ‘बराबरी हैसियत’मा हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अघि सारे, तब एमाले–माओवादी एकताको गति मन्द भयो । कारण– प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली दुई पार्टी एकीकृत हुँदा बराबरी हिस्सेदारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्वीकार्न तयार छैनन् । चुनावबाट एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ–मतका हिसाबले […]
एमाले-माओबादी एकता असर: ५ सय नेता-कार्यकर्ता नेकपामा प्रवेश
Posted on May 17, 2018 May 17, 2018 Author Jaljala Online
जेठ ३, सुर्खेत । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेशको लहर चलेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको एक दिन पहिले मात्रै माओवादी केन्द्रका करिब पाँच सय नेता कार्यकर्ताले नेकपामा प्रवेश गरेका छन् । पार्टीको कर्णाली व्यूरोले संचालन गरेको ‘एकीकृत जनजागरण अभियान’को क्रममा कर्णालीका कालिकोट, जुम्ला मुगुमा नेकपामा प्रवेश गर्नेको लहर चलेको हो । […]